1 & 2 Ulwaleko PCB Abavelisi | I-China 1 & 2 Uluhlu lwePBP yeFektri kunye nabaXhasi
Ibhodi yesekethe emi-2 yokutshixa nge-smart elektroniki
Le yibhodi yesibini yesekethe yebhodi yesekethe ye-smart home. Ukuqinisekiswa kwe-UL ShengYi S1141 FR-4 tg130, ubukhulu bebhodi ye-1.0mm, ubukhulu be-1 OZ (35um) ubukhulu, ukugqitywa kwegolide yokuntywila, imaski eluhlaza kunye nescreen esimhlophe. Njengoko yibhodi encinci, i-PCB ehanjiswa yiphaneli 20 * 3 = 60 ii-PC ngephaneli. Isishwankathelo iprofayile sebenzisa isitampu umngxuma kunye nokubala CNC. Lonke ugcwaliso lwemveliso kunye nemfuno yeRoHS.
2 umaleko ibhodi yesekethe HASL Lead Free sigqibe
Le bhodi yesibini yesekethe yemveliso evuselelekayo. Ukuqinisekiswa kwe-UL ShengYi S1141 FR-4 tg130, ubukhulu bebhodi eyi-1.6mm, ubukhulu be-1 OZ (35um) ubukhulu bobhedu, i-HASL ikhokelela ekugqityweni kwasimahla, imask yokuthengisa eluhlaza kunye nescreen esimhlophe sesilika. I-3 PCS iphaneli nganye ngenkqubo ye-V-Sika ulwandiso. Lonke ugcwaliso lwemveliso kunye nemfuno yeRoHS.
2 umaleko ibhodi yesekethe ngumaleko umngxuma PCB yemveliso woluvo
Le yibhodi yesibini yesekethe yomaleko enomngxunya osisiqingatha semveliso yoluvo. Ukuqinisekiswa kwe-UL Shengyi S1141, FR-4 tg130, 1.6mm ubukhulu, 1.5 OZ (50um) ubukhulu bobhedu, imask eluhlaza eluhlaza kunye nescreen esimhlophe sesilika. Kukho ikhowudi ye-QR kwi-PCB ukuyichonga. Lonke ugcwaliso lwemveliso kunye nemfuno yeRoHS.
1 & 2 umaleko PCB \_ RoHS ukuthobela 2 maleko FR4 PCB
Le yibhodi yesibini yesekethe yokujikeleza ngokuntywiliselwa ngegolide. Ukucaciswa kumgangatho oqhelekileyo, i-FR4 tg130, ubukhulu be-1.6mm, i-1 OZ (35um) ubukhulu bobhedu, imaski eluhlaza eluhlaza kunye nescreen esimhlophe sesilika. Njengoko yibhodi encinci, i-PCB ehanjiswa yiphaneli 20 * 3 = 60 ii-PC ngephaneli. Isishwankathelo iprofayile sebenzisa isitampu umngxuma kunye nokubala CNC. Lonke ugcwaliso lwemveliso kunye nemfuno yeRoHS.